पुराना लुगाको तनावमा हुनुहुन्‍छ ? बुटवलमा आयो कपडा बैंक – Samatal Online
पुराना लुगाको तनावमा हुनुहुन्‍छ ? बुटवलमा आयो कपडा बैंक
बुटवल, १६ साउन। “तपाईहरुले दिनुहोस साथ, उज्यालो गराउछौ हरेक गरिबको अँध्यारो रात ” भन्ने मुल कुरा लाइ आत्मसात गर्दै बुटवलमा पनि कपडा बैंक खोलिएको छ ।
यो कपडा बैंकमा पैसामा कारोबार हुँदैन, लेनदेन सित्तैमा हुन्छ। धेरै मान्छे छन् जसले एउटै लुगा वर्षौंसम्म लगाउने गर्दैनन्। नच्यातिएका र लगाउन मिल्ने लुगा पनि अलि पुरानो भएपछि फोहोरमा लगेर फालिरहेका हुन्छन्।
कतिलाई त पुराना कपडा व्‍यवस्थापन गर्न तनाव पनि भइरहेको हुन्छ। युवाहरूको यो अवधारणाले लाउन नपाएकाले कपडा पाउने र व्‍यवस्थापन गर्न चाहनेले तनाव लिनुनपर्ने भएको छ। यस्तो काम देखेपछि बाटोमा हिँड्नेहरू दंग मानेर प्रशंसा गरिरहेका छन् ।